10 months, 3 weeks ago 943 Qoodi
Manni Murtii Olaanaa Federaalaa dhaddacha Heeraa fi Farra Shororkeessummaa 3ffaa Lidataa dhaddacha har'a Waxabajjii 21, 2013 ooleen himatamaan Janaraal Sa'aare Mokonniin fi Mejar Janaraal Gazaa'i Abarraa ajjeesuun shakkame irratti hidhaa cimaa umurii guutuu itti murteesseera.
Himatamaan Kumalaa Masaafint Xigaabuu jedhamu kun yakka kana akka hin raawwanne ragaa namoota sadi dhiyeessuun kan morme ta'uus manni murtichi ragaa namaa fi sanada erga qorate booda namni kun yakka kana irratti balleessaadha jechuun hidhaa umurii guutuun akka adabamu murtoo dabarseera.
Dhaddacha darbe Waxabajjii 11, 2013 ALH oolee irratti Abbaan Alangaa Waliigalaa Federaalaa Kumalaa Masaafint irratti ragaalee ulfaateessitu sadi dhiyeessuun du'aan akka adabamu mana murtiitti gaafachuun isaa ni yaadatama.
Abukaatoonni himatamichaa gama isaanin himatamaan kun rikardii yakka akka hin qabne ibsuun akkasumas namoota yakka kana raawwachuuf isa waliin waliigaltee godhaniiru jedhaman hundu himannaan isaani yeroo addaan cite jiru kanatti kun akka adabbii ulfaateessitu qabamu akka hin qabne eeraniiru. Dabalataan amala gaarii akka qabu, maatii harkasaa eegan akka jiranii fi Raayyaa Ittisa Biyyaa keessatti waggaa jahaaf tajaajilusaa eeruun adabbii Abbaa Alangaan gaafate akka hin murtoofne gaafatanii turan.
Yaada bitaaf mirgaa kan dhaggeeffate manni murtii federaalaa, dhaddacha har'a Waxabajjii 21, 2013 ooleen himatamaa Masaafint Xigaabuu irratti hidhaa cimaa umurii guutuu murtesseera.
Dhaddacha Mana Murtii Sa'aare Mokonniin
Himatamaa Janaraal Sa'aare Mokonniin faa ajjeesuun himatame, du'aan akka adabamu gaafatame
Obbo Jawar Mohammadfaa har'aa booda mana murtiitti dhiyaachu akka hin barbaanne ibsan